> Resource> Mac> iMac Photo Recovery: Olee naghachi ehichapụ Photo si iMac
Olee Otú M Pụrụ Weghachi ehichapụ Photos si iMac
M ehichapụ ihichapụ ụfọdụ foto ndị si m iMac mmadụ na mberede taa, na m bupụrụ ahịhịa dị nnọọ ugbu a. Ma m chọrọ na foto azụ ịnụ ọkụ n'obi na! Kedu ihe m nwere ike ịme?
Ebe ọ bụ na ị na-bupụrụ ahịhịa, ndị kasị mma na kacha ngwọta naghachi ehichapụ oyiyi na iMac bụ iji Time Machine ndabere. Ma ọ bụrụ na ị na-adịghị Time Machine ndabere, ị ka nwere ike naghachi ehichapụ foto site na iMac dị ka ogologo oge ị na-edinam ozugbo na-eso nri nzọụkwụ. Otu nkịtị uche banyere foto ọnwụ bụ na ha dị nnọọ ibu keerughi na gị iMac tupu ọhụrụ data na-edochi ha. Ya mere, na-akwụsị na-eji gị iMac ma na-a-atọ ndị ọzọ iMac foto mgbake ngwa iji weghachite gị ehichapụ photos ugbu a.
Wondershare Data Recovery for Mac Nwere ike ịbụ gị nhọrọ kasị mma iji weghachi furu efu, ehichapụ, formatted ma ọ bụ ọbụna rụrụ arụ oyiyi si iMac, n'agbanyeghị na foto na-efu si iPhoto, iMac ahịhịa, ma ọ bụ ndị ọzọ na nchekwa ngwaọrụ dị ka igwefoto dijitalụ, mpụga ike mbanye, kaadị ebe nchekwa, wdg ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery for Mac si n'okpuru. N'ọnwụnwa a version-enyere gị aka iṅomi gị iMac na ịhụchalụ hụrụ photos mere na ị pụrụ ime ka n'aka otú ọtụtụ foto na ị ga-enwe ike iji weghachite.
3 Nzọụkwụ hazie iMac Photo Recovery
Nzọụkwụ 1 Họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode-amalite Iweghachite
Wụnye Wondershare Data Recovery for Mac na gị iMac na ẹkedori ya, ị ga-ahụ a mmalite window ngosipụta eso nhọrọ: "Echefuola File Iweghachite", "Raw Iweghachite", "nkebi Iweghachite", "iPhone Iweghachite si iTunes" na "Wubàtá Iweghachite". Ị nwere ike gụọ zuru ezu ntuziaka nke ha ka ha na-amụta otú ha na-arụ ọrụ.
Ebe a, na-agbake ehichapụ foto site na iMac, ị nwere ike na-agbalị "Echefuola File Iweghachite" mbụ.
Nzọụkwụ 2 Họrọ nkebi / Mpịakọta na gị iMac ka iṅomi maka Lost Photos
Na nke a dị mfe nzọụkwụ, ị dị nnọọ mkpa họrọ nri nkebi ma ọ bụ olu na-amalite ịgụ isiokwu furu efu oyiyi. All partitions na olu ga-akpaghị aka ga achọpụtara na depụtara na omume window. On ọnọdụ na foto gị furu n'ihi formatting, ị nwere ike họrọ "nwee miri Doppler" nhọrọ.
Cheta na: Biko n'ụzọ kwesịrị ekwesị jikọọ gị mpụga nchekwa na ngwaọrụ gị iMac bụrụ na ị chọrọ iji weghachite foto site na ya.
Nzọụkwụ 3 Preview na Weghachi ehichapụ Photos si iMac
Ugbu a niile hụrụ oyiyi ga-gosiri na nchekwa na n'aka ekpe nke window. Ịnwere ike ihuchalu ha ka ha ego otú ọtụtụ foto na ị ga-enwe ike iji weghachite. Wee họrọ ndị a ihe oyiyi gị mkpa ma pịa "Naghachi" iji weghachi na-azọpụta ha azụ gị iMac.
Cheta na: Iji zere data overwriting, biko họrọ a ọhụrụ nkebi / olu na-natara oyiyi.
MacBook Air Iweghachite: Olee naghachi Data si MacBook Air
Top 5 Mac Draịvụ Iweghachite ngwaọrụ nke na-eweghachiri data on Mac OS X
5 ụzọ banyere otú nyefee foto site na iphone ka mac
Best 3 Android emulator maka Mac na-agba ọsọ gị chọrọ Android égwu
Atomix Productions: VirtualDJ Home maka Mac